Naghachi Lost Data on Mac OS X El Capitan (10.11)
Ihe ikpeazụ ị chọrọ mgbe upgrading gị iOS ihe ruo nkeji dị ka Mac OS X El Capitan (10.11), na-enwe ida niile gị onwe onye faịlụ dị ka a n'ihi nke mmegolite. Na ọtụtụ ikpe, mgbe smartphone ọrụ nweta nkwalite ọhụrụ nsụgharị nke mbụ ha sistem, ha na-eche ihe ize ndụ nke adịkwa ha niile onwe faịlụ, isi ruru akwusighi mbipụta.
Mac OS X El Capitan (10.11) bụ isịneke, ọtụtụ ọrụ agụụ na-agụ nwere ọhụrụ a sistemụ na ha Mac ngwaọrụ, ga-enwe akụda ọrụ nke inwe ndabere ha faịlụ, tupu shifting ruo ọhụrụ iOS version. O sina dị, ọ bụghị ihe niile ọrụ ga na-echeta na ndabere ha faịlụ. Nke a pụtara na, ọ bụrụ ihe ọ bụla na-aga na-ezighị ezi, dị ọrụ ga-efunahụ ha faịlụ na ọ bụrụ na a na-ezighị ezi gbanwee ọnọdụ na-achụ ọsọ, onye ahụ nwere ike gharazie ya ma ọ bụ ya faịlụ ruo mgbe ebighị ebi.
Ya mere, olee otú anyị nwere ike naghachi furu efu data on Mac OS X El Capitan (10.11)?
Ihe mbụ na-eme mgbe adịkwa data on Mac OS X ei Capitan (10.11)
Ozugbo na-amara na i furu efu data mgbe upgrading gị aga na Mac ngwaọrụ OS ka Mac OS X ei Capitan (10.11), ihe mbụ ị na-eme bụ iji nweta a pụrụ ịdabere na mgbake ngwá ọrụ si Apple ụlọ ahịa. Zere ihe ọ bụla ọzọ tampering na Njikwa faili, dị ka a pụrụ iduga gị overwriting ochie data dị ka ị ịnyagharịa site na Njikwa faili.
Adịghị dismount na kaadị ebe nchekwa ma ọ bụrụ na ihe ọ bụla ma ọ bụ ike tọgharịa ngwaọrụ. Gaba ogologo Apple ụlọ ahịa ma chọọ a pụrụ ịdabere na data mgbake ngwá ọrụ. Wondershare Data mgbake ngwá ọrụ maka Mac bụ ihe kasị mma ngwa n'ihi na ọrụ a, download na wụnye ya mbụ.
Olee otú naghachi furu efu data si Mac OS X ei Capitan (10.11)
Ụzọ kasị mma naghachi furu efu data si a na ngwaọrụ na a preinstalled Mac OS X ei Capitan (10.11) bụ site na iji Wondershare Data Recovery ngwá ọrụ. Wondershare Data Recovery Ngwá ọrụ bụ nnọọ adaba n'ihi na ọrụ a karịsịa n'ihi na ọ bụ ọrụ enyi na enyi na-adị mfe inwe. Nanị ole na ole clicks na a okwu nke nkeji ị ga-ewepụta gị furu efu akwụkwọ.
Ụfọdụ ọwọrọiso atụmatụ nke Wondershare Data Recovery ngwá ọrụ na-agụnye;
Ọ nwere ike na-agbake data na e ehichapụ,-ezighị ezi formatted ma ọ bụ ọbụna emerụ.
Ọ bụ dakọtara na a dịgasị iche iche nke faịlụ usoro mpịakọta gụnyere FAT16 / 32 na NTFS.
Nwere anọ irè mgbake nhọrọ ya bụ; Raw mgbake, nkebi mgbake, malitegharịa mgbake na efu faịlụ mgbake. Ndị a mgbake ụdịdị na-eji dabere na ihe mere iji maka faịlụ ka-apụ n'anya.
Nwere ike naputa niile faịlụ formats.
Nke a na usoro adịghị agbanwe ma ọ bụ gbanwee furu efu data dị ka ọ na weere ya.
Anọ mfe nzọụkwụ-agbaso mgbe agbake furu efu data iji Wondershare Data Recovery ngwá ọrụ
1. Anya isi na i tinyeworị ibudatara na arụnyere na Wondershare Data Recovery ngwá ọrụ, na-emeghe omume na họrọ furu efu mgbake mode. Atọ ndị nke ọzọ ụdi mgbake nhọrọ kwesịrị na-eji bụrụ na furu efu data bụghị e deere site mbụ nhọrọ.
2. ịgụ isiokwu na-esote bụ burukwa. Ịgụ isiokwu a na-eme site na-ahọpụta Doppler nhọrọ na interface. Ọ bụrụ na ị nwere ihe karịrị otu mbanye na gị Mac ngwaọrụ mgbe ahụ scanning bụ a amanyere bụ iwu nke ọ bụla mbanye. Otú ọ dị, ọ bụrụ na ị nwere nanị otu ezi uche mbanye na gị Mac, scanning ga-eme nanị n'ihi na nke a ezi uche mbanye. Ịgụ isiokwu a na-eme iji chọpụta na ọnọdụ nke ahịhịa igbe gị Mac ngwaọrụ.
ma ọ pụrụ ịhụ nke ahụ furu efu faịlụ na ndepụta.
4. N'ikpeazụ, họrọ ọnọdụ ebe ị chọrọ ịzọpụta Natara faịlụ gị Mac ngwaọrụ, wee pịa na-agbake. The furu efu faịlụ ga-akpaghị aka ga-Ewepụtara na nchekwa na ị dị nnọọ họrọ na mbụ na.
Bara uru Atụmatụ maka upgrading ka Mac OS X El Capitan (10.11)
Iji na-na odi mfe n'akụkụ, mgbe upgrading ka Mac OS X El Capitan (10.11), hụ na ị na-agbaso ndị a 5 Atụmatụ. Ndị a Atụmatụ ga-azọpụta unu nsogbu nke na-achọ ka tụgharịa azụ gị gara aga iOS version, ma ọ bụ ọbụna regretting Mac OS X El Capitan (10.11) nweta nkwalite ke akpa itie.
1. ego maka ndakọrịta àgwà. Tupu ị na-ekpebi na ị chọrọ nweta nkwalite gị iOS ka Mac OS X El Capitan (10.11) hụ na gị na Mac ngwaọrụ nwere ike na-akwado ya, iji zere nsogbu
2. Always ndabere gị data tupu upgrading ka ọ bụla sistemụ. Ụfọdụ sistem dị nnọọ ọjọọ na n'iyi na a nwere ike ịpụta adịkwa gị niile data mgbe na-agbalị Ọkpụkpọ mbanye na jiri OS faịlụ.
3. nkebi gị draịva maka data nchekwa. Ọ bụrụ na ị na-adịghị a ndabere disk, partitioning draịvụ ike gị pụrụ ịzọpụta gị site na adịkwa mkpa data. Mgbe niile hụ na gị onwe data bụ mgbe ke otu mbanye dị ka sistemụ faịlụ (na nke a na Mac OS X El Capitan (10.11) faịlụ).
4. Unu gārapu arụmọrụ maka elu. Unknown ka ọtụtụ ndị, na-enwe ndị ọhụrụ OS anaghị n'ezie pụtara inwe ndị kasị mma ịrụ ọrụ. Eziokwu nke okwu ahụ bụ na arụmọrụ nke OS na-adabere na ngwaike ike. Ya mere ọ bụrụ na gị ochie MacBook arụ ọrụ nke ọma na Yosemite OS, emekpala straining ya Mac OS X El Capitan (10.11) nke ga-aghọ ukwuu nke a ibu igwe.
5. Iji zere nsogbu, ịghọta nweta nkwalite ị na-akpụ akpụ to.Know uru na ọghọm tupu ị na-ekpebi iji kwalite ka Mac OS X El Capitan (10.11). Ọzọkwa, isi gị ihe mere upgrading on otú ọma ọhụrụ nweta nkwalite ga-enyere gị na gị kwa ụbọchị metụtara, ọ bụghị otú ihe ọma ọ na-eme ka ị na-eche.
> Resource> Naghachi> Naghachi Lost Data on Mac OS X El Capitan